भेटिए नायक निश्चल बस्नेतको डुब्लिकेट युवा, अनुहार मिल्दा यस्तो सम्म भयो, स्वस्तिमालाइ भने नझुक्किनुहोला ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 26, 2020 December 26, 2020 AdminLeaveaComment on भेटिए नायक निश्चल बस्नेतको डुब्लिकेट युवा, अनुहार मिल्दा यस्तो सम्म भयो, स्वस्तिमालाइ भने नझुक्किनुहोला ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झट्ट हेर्दा जो कोहीलाई लाग्न सक्छ यिनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकार तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत हुन तर नझुक्किनुस यिनी निश्चल बस्नेत होइनन । निश्चल बस्नेत जस्तै देखिने झापाका अर्पण श्रेष्ठ हुन् । निश्चल बस्नेत जस्तै अनुहार भएका अर्पण श्रेष्ठ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एकाएक चर्चाको केन्द्र बनिरहेका छन् ।
बाटोमा भेटिने धेरै मानिसले निश्चल बस्नेत भन्दै झुक्किएको कुरा अर्पण श्रेष्ठले बताएका छन् । निश्चल बस्नेतले अभिनय गरेको काले दाइ काले दाइ बोलको भिडियो उनलाई धेरै मन पर्ने बताए । उनलाई काले दाइ भन्दै मानिसले जिस्काएको रमाइलो पल सुनाए । केहि समय आगाडी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका युवास्टार अनमोल केसि जस्तै देखिने अभिषेक श्रेष्ठ पनि मिडियामा आएका थिए ।
निश्चल बस्नेत जस्तै देखिने अर्पण श्रेष्ठ संग गरिएको कुराकानी तल हेर्नुहोलाः
यो पनि हेर्नुहोस्ः आइफोन चार्ज गर्दा काठमाडौँको एक घरमा आ’गलागी ! काठमाडौँको नागार्जुनमा मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा एक घरमा आ’गलागी भएको छ । नागार्जुन नगरपालिका-१ को तुफान चोकस्थित एक तीन तले घरमा आ’गलागी भएको हो । आइफोन चार्जमा राखेर बाहिर गएको र घर फर्किँदा आ’गो लागेको थियो । उक्त आगो दमकलको सहयोगमा निभाइएको छ । घ’टनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
बबई नदिको पुलबाट खसेका रमेशका साथीहरु आए मिडियाको सम्पर्कमा, यसरी भएको थियो घ’टना ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा ६० अंक ल्याए पास, पहिले जस्तो पुरै ट्रायल पास हुनु नपर्ने…..
बिल्कुलै बेवास्ता नगरौं: भाग्य’मानी’ले मात्र देख्ने यो दुर्लभ नाग लाई छुनुहोस आफै हराउने छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
अर्काकी श्रीमती भगाएर एक हप्ता मै छोड्ने पुरुष रातारात भए फरार, २ छोरीहरु रुँदै फरार बुबालाइ यस्तो भनेपछी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)